Mmezi Mmezi Outlook. Sọftụwia Iweghachite Outlook. PST Mmezi Ngwá Ọrụ.
DataNumen Outlook Repair bụ kasị mma Outlook idozi na mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike ịrụkwa faịlụ rụrụ arụ nke Outlook PST wee nwetaghachi ozi ịntanetị niile, kọntaktị, kalenda, akara aka, ọrụ, ihe edeturu, akwụkwọ akụkọ, posts, wdg n'ime ha ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
DataNumen Outlook Repair a na-akpọbu Advanced Outlook Repair.
n'ihi na OST mgbake faịlụ na OST ka PST faịlụ ntughari, biko jiri DataNumen Exchange Recovery.
4.90 / 5 (site na 1,603 votes)
Gịnị mere DataNumen Outlook Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke ngwaahịa mgbake Outlook. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Outlook Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị nnọọ mma karịa ndị ọ bụla ọzọ na-asọmpi, gụnyere Inbox Repair tool (scanpst) na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụzi PST, n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Outlook Repair na-ese anwụrụ mpi
Outlook wee gbaghaa, ozugbo Windows melite mmemme Email m Outlook kwụsịrị ịrụ ọrụ. M na-eji datanumen ngwaahịa megharia email
Enwere m obi ụtọ na ịdị mfe nke iji na mgbake ngwa ngwa nke faịlụ ahụ. N'ihe niile, achọghị m ya ọzọ, n'ihi ya, m kwụsịrị ya mgbe faịlụ abụọ gasịrị
Ọkà mmụta sayensị lara ezumike nká
M na-eji ihe omume ọzọ emekọrịta echiche m
Nnwere Onwe n'ezie
lara ezumike nká
Ndi Albans. UK
Ọ ga-amasị m inye ekele m DataNumen Nkechi maka enyemaka gị na ngwanrọ gị nke rụrụ ọrụ ya ma kwe ka onye nweere ahụmahụ
Nwere ike 8th, 2020
Ngwá ọrụ gị nyere aka na ịgbake ozi email nwunye m niile. Ekele dịrị gị na ndị otu gị niile maka inye nzọpụta a na ịdị mfe
GE Lighting lara ezumike nká
Ozi a dị ka nnukwu BANYERE gị maka ngwa mmezi Outlook na-egbukepụ egbukepụ. Onye ahịa m na enwe ọtụtụ ọpụpụ ike
Onye isi njikwa
MS Office nkwalite kụrụ kọmputa m na m ga-ehichapụ ma wụnye ya. N'ime usoro ahụ Outlook anabataghị nke ochie.ost
M ebudatara gị ele idozi software n'ihi na nke mgbe nile njehie ozi banyere m outlook.pst faịlụ ọ bụghị mechiri emechi nke ọma
Home kọmputa ọrụ
A n'ezie oké mpempe software nke bụ super ọma na-ama miri miri ahụ ehichapụ na lost ozi ịntanetị. M jisiri ike weghachite otu nnukwu ego
Sọftụwia a dị ezigbo mma. Enwere m ekele gị maka ịnye ụdị ọrụ ahụ dị mkpa (DataNumen Outlook Repair v 1.2 zuru mbipute) maka
DATEL Systems & Akụrụngwa FZ LLC
Nexus IT maka
Enwetara m DVDRom na zippst pst-faịlụ. Enweela m ike iwepụta ya na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ọzọ.Achọrọ m ikele gị maka
Ọ ga - ekwe omume ịkọwapụta ebe na aha faịlụ ọ bụla na batch Repair tab? Nke a bụ ugbua omume na Mmezi taabụ, mgbe
Oge gara aga, azụrụ m Datanumen Outlook Repair ma enwere m obi ụtọ na ya, na-eji ya oge oge. Ugbu a, m kwesịrị iji naghachi ehichapụ ozi ịntanetị site na a ụyọkọ NSF
Achọrọ m inyocha ma hichapụ ọtụtụ ndenye
Mwube 4th, 2018
Mazi 1, 2015
Advanced Outlook Repair arụzigharịrị 19GB Outlook 2007 .pst nwere otutu nchekwa sitere na afọ 15. Ọ ghọrọ nke emerụ mgbe ike
Ngwọta maka ịgbaso njehie na nsogbu na Outlook PST File
Inbox Repair Tool Can't Recovery Ihe
Igbe Mbata Ngwaọrụ Nguzo
Ihe faịlụ a abụghị faịlụ nchekwa nchekwa nkeonwe
Achọpụtala njehie na faịlụ xxxx.pst…
Echefu ma ọ bụ hapụ paswọọdụ maka faịlụ PST ezoro ezo.
Main Akụkụ na DataNumen Outlook Repair v8.5
Kwado 32bit na 64bit Outlook 97 na 2019 na Outlook maka Office 365.
Nkwado maka Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 na Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019. Ma 32bit na 64bit sistemụ na-akwado.
Nkwado iji weghachite ozi mail, nchekwa, posts, kalenda, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ndetu na faịlụ PST. All Njirimara, dị ka isiokwu, ozi ahu, ka, si, cc, bcc, ụbọchị, wdg, na-natara.
Nkwado iji weghachite ozi ịntanetị na ederede doro anya, usoro RTF na HTML.
Nkwado iji weghachite mgbakwunye, gụnyere akwụkwọ na onyonyo ndị agbakwunyere na ozi na itinye na HTML.
Nkwado iji weghachite ihe ndị agbakwunyere, dị ka email ọzọ, akwụkwọ ọrụ Excel, akwụkwọ Okwu, wdg.
Nkwado idozi most nke faịlụ PST nke Akụrụngwa Mmezi (Nke a na-akpọkwa Inbox tool or scanpst.exe) adighi edozi ma ihe ndi ozo ndi PST apughi idozi.
Nkwado iji weghachite ihe ehichapụ Outlook, gụnyere ozi ozi, nchekwa, posts, kalenda, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ndetu.
Nkwado iji weghachite faịlụ 2GB PST buru ibu.
Nkwado iji weghachite faịlụ PST dị ka 16777216 TB (Ie 17179869184 GB).
Nkwado kewaa mmepụta PST faịlụ n'ime ọtụtụ obere faịlụ.
Nkwado iji nwetaghachi faịlụ PST echekwara, ma compressible encryption na zoro ezo dị elu (ma ọ bụ izo ya ezo kacha mma). Enwere ike ịnweta faịlụ PST ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị paswọọdụ.
Nkwado iji tọghata PST faịlụ site na Outlook 97-2002 usoro na Outlook 2003-2019 / Outlook maka Office 365, na otu aka ahụ.
Nkwado iji wepụta faịlụ PST edoziri na usoro Outlook 97-2002 na Outlook 2003-2019 / Outlook maka usoro Office 365.
Nkwado iji weghachite data na faịlụ PST rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi nke scanpst na ngwaọrụ ndozi PST ndị ọzọ enweghị ike ịmata ma weghachite.
Nkwado idozi "Enweghi ike ịmegharị ihe ndị ahụ" njehie na faịlụ Outlook PST.
Nkwado idozi nsogbu nke Outlook PST /OST faịlụ a adịghị nwayọ ma ọ bụ anabataghị ya.
Comprehensive switches ịchịkwa i scanomi, mgbake na mmepụta usoro.
Nkwado iji weghachite data Outlook site na faịlụ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) na-emebi emebi (*. Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) faịlụ (*. Vhd), Acronis True Image files (*. Tib), Norton Ghost faịlụ (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup files (*.bkf), ISO oyiyi faịlụ (*. Iso), Disk oyiyi faịlụ (*. Img), CD / DVD oyiyi faịlụ (*. Biini), mmanya 120% Mirror Disk File (MDF) faịlụ (*. Mdf) na Nero oyiyi faịlụ. (* .nrg).
Nkwado iji weghachite data Outlook site na temporary faịlụ nke Outlook mepụtara mgbe ọdachi data mere.
Nkwado iji rụkwaa faịlụ PST na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu ihe rụrụ arụ PST faịlụ.
Nkwado ịchọta ebe faịlụ PST ga-arụzi na kọmpụta mpaghara, dịka ụfọdụ nyocha ọchụchọ.
Nkwado iji chekwaa faịlụ PST ahụ natara na ọnọdụ ọ bụla, gụnyere netwọkụ jikọtara netwọị ghọtara site na kọmputa mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, n'ihi ya ị nwere ike starta PST idozi ọrụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
Nkwado ịdọrọ & dobe arụmọrụ.
Nkwado iji rụkwaa faịlụ PST rụrụ arụ site na ntinye akara iwu.
iji DataNumen Outlook Repair iji weghachite faịlụ rụrụ arụ nke Outlook PST
Mgbe gị Outlook PST faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi na ị na-enweghị ike imeghe ha kwesịrị na Microsoft Outlook, ị nwere ike iji DataNumen Outlook Repair i scanomi PST faịlụ na-agbake data site na faịlụ dị ka o kwere omume.
Rịba ama: Tupu ịrụzi faịlụ PST mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi DataNumen Outlook Repair, biko mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ PST.
Họrọ faịlụ rụrụ arụ nke Outlook PST mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi:
Can nwere ike itinye aha faịlụ PST ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ ịchọta faịlụ PST ka arụzie na kọmputa mpaghara.
Ọ bụrụ na ị maara ụdị Outlook nke isi iyi PST ka emezie, mgbe ahụ ị nwere ike ịkọwa ya na igbe ngwakọta. n'akụkụ igbe ederede dezie faịlụ, usoro ndị nwere ike ịbụ Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, Outlook 2013-2019 / Office 365 PST faịlụ na Outlook 2013-2019 / Office 365 OST faịlụ. Ọ bụrụ na ị hapụ usoro dịka "Ekpebisiri ike", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair ga-enyocha isi iyi PST faịlụ iji chọpụta usoro ya na akpaghị aka. Agbanyeghị, nke a ga-ewe oge ọzọ.
Site na ndabara, DataNumen Outlook Repair ga-azọpụta natara data n'ime ọhụrụ faịlụ aha xxxx_fixed.pst, ebe xxxx bụ aha nke isi iyi PST faịlụ. Ọmụmaatụ, maka isi iyi PST faịlụ Outlook.pst, aha ndabara maka faịlụ echekwara ga-abụ Outlook_fixed.pst. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike ịhọrọ usoro nke faịlụ PST ahụ edozi na igbe ngwakọta n'akụkụ igbe edozi edezi faịlụ, usoro ndị nwere ike ịbụ Outlook 97-2002 na Outlook 2003-2019 / Office 365. Ọ bụrụ na ị hapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair ga-ewepụta faịlị PST arụnyere na dakọtara na Outlook arụnyere na kọmpụta mpaghara.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Outlook Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi faịlụ PST isi. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro mmezi ahụ, ọ bụrụ na enwere ike idozi faịlụ PST isi mmalite ahụ nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu PST faịlụ na Microsoft Outlook. Dum nchekwa hierara ga-ewugharị chy na faịlị PST edoziri yana ozi-e na ihe ndị ọzọ enwetara wee tinye ha na folda mbụ ha. Maka lost & chọta ihe, a ga-etinye ha na Recovered_Groupxxx nchekwa.
DataNumen Outlook Repair A na-ahapụ 8.5 na Jenụwarị 26th, 2021
DataNumen Outlook Repair A na-ahapụ 7.9 na Jenụwarị 9th, 2021
DataNumen Outlook Repair 7.8 weputara na Disemba 8th, 2020
DataNumen Outlook Repair 7.6 weputara na October 31th, 2020
DataNumen Outlook Repair A na-ahapụ 7.5 na August 8th, 2020
Kpochapu ihe ndi na-abaghi ​​uru.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 7.2 na June 19, 2020
Melite ndakọrịta nke ụdị 64bit.
DataNumen Outlook Repair A na-ahapụ 7.1 na Jenụwarị 22th, 2020
Belata ebe nchekwa eji na mgbake usoro.
DataNumen Outlook Repair 7.0 weputara na Disemba 30th, 2019
DataNumen Outlook Repair A na-ahapụ 6.9 na Septemba 27, 2019
Melite ọrụ ọchụchọ.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 6.8 na June 29, 2019
Wepụ ihe ndị na-ekwekọghị na faịlụ PST ahụ.
DataNumen Outlook Repair 6.6 weputara na March 28th, 2019
DataNumen Outlook Repair 6.5 weputara na Disemba 28th, 2018
Nkwado Outlook 2019.
Auto wepu ihe na-abaghị uru.
DataNumen Outlook Repair 6.0 weputara na October 12th, 2018
Melite mgbake maka nnukwu faịlụ.
Nyekwuo njikwa na ndekọ ndozi ahụ.
DataNumen Outlook Repair 5.6 wepụtara na June 23rd, 2018
Nkwado Outlook maka Office 365.
Meziwanye arụmọrụ nke nsụgharị 64bit.
DataNumen Outlook Repair 5.5 weputara na March 29th, 2018
Nkwado iji weghachite folda na ozi ehichapụ.
Nkwado Outlook 2016.
DataNumen Outlook Repair A na-ahapụ 5.3 na July 16th, 2015
Nkwado iji weghachite ezighi ezi data chunks.
Nkwado ịchịkwa ma ịghachite ehichapụ, zoro ezo ma ọ bụ lost wee chọta ihe.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 5.2 na Septemba 23, 2014
DataNumen Outlook Repair 5.1 wepụtara na July 9, 2014
Nkwado 64bit Outlook.
DataNumen Outlook Repair 4.5 wepụtara na Eprel 15, 2014
Nkwado iji weghachite data Outlook na VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) faịlụ (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) faịlụ (* .vhd), Acronis True Image files (* .tib), Norton Ghost faịlụ (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup files (*.bkf), ISO image files (* .iso), Disk image faịlụ (* .img), CD / DVD oyiyi faịlụ (* .bin), mmanya 120% Mirror Disk File (MDF) faịlụ (* .mdf) na Nero oyiyi faịlụ. (* .nrg).
DataNumen Outlook Repair 4.1 wepụtara na February 12, 2014
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 4.0 na Disemba 12, 2013
Na-akwado Microsoft Outlook 2013.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 3.2 na August 3, 2010
Meziwanye nchọpụta njehie na usoro nhazi.
Meziwanye ogwe ọganihu iji gosipụta ọganihu mgbake n'ụzọ ziri ezi.
Na-akwado Microsoft Outlook 2010.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 3.1 na Mee 18, 2010
Mee ka arụmọrụ nke mgbake dịkwuo mma.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 3.0 na March 18, 2010
Melite Doppler na mgbake ọsọ.
Belata ebe nchekwa oriri n'oge usoro mgbake.
Gbochie naghachi ọdịnaya abụọ na usoro mgbake.
DataNumen Outlook Repair 2.5 wepụtara na February 10, 2010
Nkwado iji weghachite ọtụtụ njirimara nke ihe na ogbe.
Nkwado iji weghachite ma gbanwee ọtụtụ ihe bara uru.
Melite ndakọrịta na sistemụ Windows 9x.
Idozi ahụhụ na kewara nnukwu faịlụ.
DataNumen Outlook Repair 2.1 wepụtara na Eprel 28, 2009
DataNumen Outlook Repair 2.0 wepụtara na July 5, 2008
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 1.5 na May 28th, 2008
Kwado Microsoft Windows Vista.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 1.4 na May 7th, 2007
Na-akwado Microsoft Outlook 2007.
Idozi ahụhụ na nhazi nnukwu ozi.
DataNumen Outlook Repair 1.2 wepụtara na Ọkt 9th, 2006
Kwado usoro mgbake dị elu.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 1.1 na Disemba 31st, 2005
Nkwado ịchọpụta isi iyi faịlụ PST na akpaghị aka.
Nkwado iji chọpụta usoro mmepụta PST na-akpaghị aka dịka ụdị nke Outlook arụnyere na kọmputa mpaghara.
Nkwado ịchọta ma họrọ faịlụ PST ka emezie ya na kọmpụta mpaghara, dịka ụfọdụ njirisi ọchụchọ.
DataNumen Outlook Repair A tọhapụrụ 1.0 na November 19, 2005
Ngwá ọrụ dị ike iji weghachite faịlụ Microsoft Outlook rụrụ arụ (.pst).
Naghachi ozi ehichapụ site na Outlook Express dbx faịlụ.
Naghachi ozi ịntanetị site na rụrụ arụ Outlook Express dbx na mbx faịlụ.